Global Voices teny Malagasy · admin – Jona 2017
admin · Jona, 2017
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Jona, 2017
Maraoka: Ny Tena Zava-misy Amin'ny Fivarotan-tena
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana30 Jona 2017
Tranga iray ao Maraoka ny momba ny mpianatra mpivaro-tena. Bilaogera Words For Change namoaka lahatsoratra mahaliana momba ny tovovavy ambanivohitra ao Maraoka, tonga tao an-tanàna lehibe mba hianatra eny amin'ny oniversite, ary niafara tamin'ny fivarotan-tena.
Maraoka: Miaka-tsehatra Ny Gnaoua!
Isan-taona amin'ny volana Jiona, mpizaha tany an'arivony avy amin'izao tontolo izao sy Maraokana manerana ny firenena no mirohotra ao Essaouira, tanàna kely amoron-tsiraka tokony ho 200 kilaometatra avy ao Marrakesh feno olona, mba hamonjy ny Fetiben'ny Gnaoua sy ny mozika manerantany.
Nikaragoà: Rindrambaiko Malalaka Ao amin'ny Andrim-panjakana
Amerika Latina30 Jona 2017
Miara-miasa amin'ireo andrim-panjakana ilay bilaogera LEOGG mba hahazo tombontsoa amin' ireo teknolojia sy hahatonga azy ireo mahomby kokoa.
Chile: Mpianatra Mitoraka Rano Ny Tavan'ny Minisitry Ny Fanabeazana
Leon'ny famoretana sy ny fanagadrana mpandray anjara amin'ny fihetsiketsehana manohitra ny Lalàna Vaovao momba ny Fanabeazana (LGE) sy ny daroka ary ny fanararaotana ataon'ny miaramila amin'izy ireo mandritra ny fihetsiketsehana ny mpianatra ao Chile,
Nahoana No Nandray Anjara Tamin'ny Fifidianamben'ny Fanjakana Mitambatra Ilay Olompirenena Britanika Teraka Etiopiana
Afrika Mainty29 Jona 2017
"Reharehako i Yemi Hailemariam, vadin'i Andy Tsege, izay nandia ny làlana rehetra mankany Maidenhead mba hihaonana amin'i Theresa May & hangatahana ny famotsorana an'i Andargachew."
An'aliny Ao ny Kroasia no Manameloka ny Tsy Fahombiazan'ny Governemanta Amin'ny Fanavaozana ny Sehatry ny Fanabeazana
Eoropa Afovoany & Atsinanana29 Jona 2017
“Tsy mila fitaizana sy fanabeazana patriarika izahay”; “Ataovy any amin'ireo fianarana mamily fiara ny fivavahana”; “Ataovy any an-tsekoly ny fanabeazana ara-pananahana”.
Ny Famonoana Faobe tao Thiaroye ny Taona 1944, Tranga Nahamenatra Tamin'ny Vanim-potoana Fanjanahantany Frantsay Tany Afrika
Miaramila afrikana maro, mpanafaka an'i Frantsa, novonoin'i Frantsa. Heloka tokana monja no vitan'ireo miaramila ireo antsoina hoe ' 'Miaramila Senegaly Mpitifitra', dia : ny naha-Afrikana azy ireo.
Mpiady amin'ny Kolikoly Voafelaky ny Fiampangàna Ho Nanao Kolikoly Any Azia Afovoany
Azia Afovoany sy Kaokazy29 Jona 2017
"Efa simba hatry ny ela ny zavatra rehetra. Tsy misy azo avotana intsony!"
Mampitsahatra ny Tranokalan'ny Mpanivan'ny Fanjakana Rosiana Ireo Mpiady Anaty Akata Nomerika
Rosia27 Jona 2017
Ny fomba namitahan'ny mpijirika ireo mpamatsy tolotra Aterineto tamin'ny nibahanany ny vohikala mpanivan'ny fanjakana.